Security manje kungenzeka ukuba igama isici main ezithinta indlela esiphila. Ngezikhathi ezithile sizwa ukuthi kwamanye amazwe athuthukile abantu baphile ngaphandle kokwesaba ngoba ukuphila kwabo, impilo - shiya umnyango ayivaliwe. Ngeshwa, ezweni lethu umnyango ngamabomu uzobe bachaza kubaduni njengoba inselele, ngenxa yokufaka izingidi nge ezengeziwe imisebenzi Ukuvikelwa iba zihambisane kakhulu ngeminyaka kuphela. Akusiyo imfihlo ukuthi inani amacala ahlobene wokuba kuhlaselwe yomunye ezinhle, ngokuqondile wakhona inhlalakahle izakhamuzi. Lokho kungenxa yokuthi ukufakwa sivala Petersburg - bayindlala kakhulu. Lokho fihla, Russia idume hhayi kuphela show-Men, abahlabeleli, izimbongi, kodwa futhi ubugebengu abaphathi. Ukuze amasela abanolwazi Hack ezivamile kudivayisi ukukhiya silula, ngoba Akubalulekile skimp on izinga sivala. Kulezi sivala kungenziwa ngokuthi eziningi abaholi olungenamkhawulo. imodeli ngamunye kunezinzuzo zako siqu. Chiza amadivayisi, isithiyo futhi crit - ngakho trio ubukeka engcono.
Uma kwenzeka nihlakaze hhayi impahla yakhe, khona-ke nakanjani sicabanga ngendlela emizini yabo ukwakha kwenqaba yangempela kuyinto ezingafinyeleleki amasela. Ukuze kufezekiswe le, kumelwe lowo muntu ukusungula kudivayisi ukukhiya eliphezulu. Ngokwesibonelo, CISA sivala. Okwamanje obala ethulwa, imishini ubuxhakaxhaka obuzisebenzela lokhu brand. ukunakekelwa okukhethekile bafanelwe recoded CISA sivala. Leli qembu linikeza ikhono ukwandisa sivala iminyango umgqekezi ngenxa kungenzeka reprogramming. Ngaphezu kwalokho kuyafaneleka-uhlelo ezimbili sivala. CISA embaxambili uhlelo sivala ukuxhuma uMbhalo bese isigwedlo izindlela. Ngohlelo okunjalo lula ukufakwa, ukunika ukukhetha ukulondoloza imali, njengoba empeleni - yidivayisi 2. Dual-uhlelo sivala ukukwenza kokubili benethuba ukuguqulwa kokubika, ngaphandle kwalo. Idumela uvala amadivayisi kwindawo elandelayo ezibucayi uvalo sivala. uvalo uhlelo ikuvumela ukuba ngokushesha ukuya endlini uma ingozi. Petersburg, uyena onelungelo lokusho ukuthi kube khona castle 7RMP eKrethe, esetshenziselwa avamile umlilo iminyango.
A okuthembekile ukukhiya simiso siqinisekisa ukuphepha impilo impahla, umndeni. Namuhla e emakethe yethu kukhona uhla elikhulu izinhlobo ezahlukene sivala nokuba khona uhlu umklamo zakamuva izixazululo. Nokho, kukhona ethafeni kusukela iphuzu ezakhayo Ngenxa imodeli, kodwa kudivayisi enokwethenjelwa kakhulu ukuqinisekisa ukuvikeleka efanele yamagceke. Ikakhulukazi, usebe ikhiye isithiyo sakhiwe izingxenye eziningana, nakuba lokhu akubavimbeli kubenza bangaziniki ukusebenza eliphezulu. Petersburg namuhla, ungakwazi ukuthenga isithiyo-4 Ilokhi - imodeli ezivame kakhulu sha. Ukuze sithathe lezi amadivaysi akudingeki asukume etafuleni, njengoba kuba lula ukwenza futhi ngokushesha olwengeziwe ngesifundo izitolo web thematic. Kwamanye amawebusayithi loniketa ukukhiya amadivayisi zakamuva futhi anikwa amasevisi ezivelayo ezifana ukufakwa kwezibambo zesihluthulelo.
Amalangabi umlilo okuphansi ezahlukene
Limited ukushelela umehluko: ukuthi isebenza kanjani?
Kanjani ukuthuthukisa clairvoyance? Kanjani ukuthuthukisa ikhono clairvoyance futhi umuzwa?
Indlela ukudlulisa i-traffic MTS?
Zehnder (radiators): ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza
Izinwele ukususwa bikini zone: indlela aphuce endaweni pubic